Best Movies Featuring Ụgbọ oloko | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Best Movies Featuring Ụgbọ oloko
Gịnị ga-akpali gị na-a ụgbọ okporo ígwè na njem karịa ekiri ihe na-akpali akpali Movies Featuring Ụgbọ oloko? Were a anya anyị ndepụta nke kacha mma Movies Featuring Ụgbọ oloko, na Tweet anyị na @saveatrain na-agwa anyị nke ndị ị hụrụ na ihe ma ọ bụrụ na ị hụrụ ha n'anya dị nnọọ ka anyị mere.
On top of anyị ghota na Movies Featuring Ụgbọ oloko bụ – Harry Potter Movies 1 ka 8 (2001-2011)
Dabere na ama usoro nke akwụkwọ site J.K. Rowling, asatọ ndia Movies Featuring Ụgbọ oloko na-egosi a kpokọtara fantasy banyere-eto eto ọkachamara, Harry Potter. Ọ na-amụta o nwere kpokọtara ike ma na-agakwa Hogwarts School of Ịta Amoosu na Wizardry, ebe ọ na-nọrọ ndụ ọhụrụ jupụtara na ọtụtụ nsogbu, villains, na mmeri.
Ma ebe ka ụgbọ oloko na-abịa? On Harry mbụ ụbọchị nke akwụkwọ, o nwere banye Hogwarts Express, a ụgbọ okporo ígwè dị na n'elu ikpo okwu 9 ⅓. Ọ bụ naanị inweta site na-agba ọsọ – ngwa ngwa- kwupụta brik mgbidi n'agbata nyiwe 9 na 10. Ozugbo n'ụgbọ okporo ígwè, o zutere Ron Weasley na Hermione Granger, onye ejedebe ịbụ ndụ ya-ogologo oge enyi.
N'oge nile nke movies, na Hogwarts Express ụgbọ okporo ígwè na-aga n'ihu na-anọchi anya mmalite na ọgwụgwụ nke ọ bụla akwụkwọ afọ ma na-enye kwaaji maka ụfọdụ mara mma ikpọ akụkọ-edoghi. Karịsịa na oge Harry na Ron Agbaghara ụgbọ okporo ígwè na nwere ada ihe enchanted ụgbọ ala akwụkwọ!
Jide n'aka na ị download dịkarịa ala otu n'ime ndị a Movies Featuring Ụgbọ oloko gị ekwentị ma ọ bụ mbadamba tupu ị akwụkwọ gị ọzọ ụgbọ okporo ígwè na njem.
Amsterdam na London site na ụgbọ oloko
Rotterdam na London site na ụgbọ oloko
Paris iji ụgbọ okporo ígwè gaa London na London
Togbọ oloko na-aga London gaa London
Akwukwo nke Sinefil kesara (@ city.of.cinema)
Quirky na-emetụ, a ghota nke, Movies Featuring Ụgbọ oloko, nwere niile hallmarks nke onye dere ya-director, Wes Anderson. Mgbe papa ha na-ezukọ na mberede ọnwụ, nwoke atọ njem gafee India ụgbọ okporo ígwè na mgbalị ha dị ná mma.
Egwuri site Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, onye ọ bụla na nwanne na-enwe ịda mbà n'obi, na a ọtụtụ sulking na ịlụ ọgụ ensue. Ma nke N'ezie, ịbụ a Wes Anderson nkiri – e nwere ọtụtụ keukaochi twists na ibe. Otu n’ime ụmụnna ahapụla nke ya ime nwunye na ulo ma onye ozo di iche na enyi ya nwanyi okụt ima ya na otu n’ime ndị na-ejere ụgbọ okporo ígwè ahụ.
E nwekwara a venomous agwọ, a olili ozu, a na-atụgharị uche na ... nke ọma, anyị ga-enye ihe ọ bụla ọzọ anya. Kwe ka ihe omimi a kpalie gị ịtụ nke gị ụgbọ okporo ígwè njem.
Nuremberg ruo Berlin site na ụgbọ oloko
Aachen gaa Berlin site na ụgbọ oloko
Hamburg na Berlin site na ụgbọ oloko
Murder na Orient Express (2017)
A post nke Steve na-akọrọ (@grushkov)
Dabere na ama Agatha Christie akwụkwọ, a nke oge a remake nwere a kpakpando ndị na-nkpọchi nkedo gụnyere Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Johnny depp, na Willem Dafoe. Kenneth Branagh bụ na-eduzi ọrụ nke Hercule Poirot, na ọ na-eduzi fim na nke a bụ akụkụ nke anyị na Movies Featuring Ụgbọ oloko.
E wezụga iwebata na ụfọdụ flashbacks, dum storyline atọrọ na a okomoko ụgbọ okporo. Poirot mbadamba ndị Orient Express na-a ogologo oge kwesịrị ezumike. Na klas mbụ okomoko mmanya na ụgbọ ala erimeri, ọ na-ezute otu ndị njem yiri ka ha enweghị njikọ. Otu n'ime ha na-azọrọ na ya ndụ bụ ihe ize ndụ na-agba mbọ n'oru Poirot – ihe kpọrọ mata – na-edebe ya mma.
ọ jụ, na njem niile gaa bed. N'ụtụtụ echi, ndị njem ahụ na-hụrụ gburu. Iji mee ka ihe ịrịba ama karị, okporo ígwè derails na snow. Poirot na-recruited dozie mpụ tupu ụgbọ okporo ígwè bụ azụ na egwu na ndị uwe ojii maara nke igbu ọchụ.
Na a mara mma gwara, ịrịba ama omimi thriller, akụkọ nekpughe ka Poirot ajụjụ ọnụ ọ bụla njem na chọpụtara na ndị ahụ ọ bụla n'ime ha nwere a na nzuzo, ọ bụghị ihe niile bụ ka o yiri.
Nke a bụ a ga-ahụ n'etiti ndị, Movies Featuring Ụgbọ oloko, bụghị naanị n'ihi na amamiihe storyline na mbụ na klas eme kamakwa ọmarịcha mma na echiche nke ụgbọ okporo ígwè na ya.
Brussels na Amsterdam site na ụgbọ oloko
Bonn na Amsterdam site na ụgbọ oloko
Paris ka ụgbọ oloko ga Amsterdam
The Little Engine Ike Ndị Nwere Ike (2011)
Ọ bụrụ na ị nwere obere adventurers ejegharị ejegharị na gị, ina ha ụtọ maka njem na nke a eyen-enyi na enyi film. The classic ụmụ akụkọ abịa ndụ na a zuru-ogologo nkiri na a kpakpando ndị na-nkpọchi nkedo. Celebs agba na-agụnye Jamie Lee Curtis na Whoopi Goldberg.
The nkiri ndị a na Little Engine – a toy ụgbọ okporo – ofụri ya ahụmahụ na DreamLand, dị ka ọ na interacts na ndị ọzọ ụgbọ okporo ígwè na-agụ akụkọ na ụmụaka. E nwere ihe a yiri storyline ke ata ụwa, ebe protagonist otu nwa okoro nta a na-akpọ Richard. Otú ọ dị, ndị a na òtù abụọ ikukota mgbe Richard agwụ elu n'ime DreamLand. N'iru ya e-akpata nsogbu, so he needs to go back. Adventure and hijinks ensue while he and the toys try to get him back into the real world.
Gịnị a oké ụzọ ka n'ike mmụọ nsọ site Movies Featuring insgbọ oloko njem site ụgbọ oloko!
Togbọ oloko na-aga Brussels gaa Paris
Togbọ oloko na-aga London gaa Paris
Marseille na-aga Paris site na ụgbọ oloko
Amsterdam gaa Paris site na ụgbọ oloko
Njikere dee gị onwe gị Movies Featuring Ụgbọ oloko metụtara akụkọ? Gị www.saveatrain.com na-esi na ndị dị ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè maka gị ọzọ ụgbọ okporo ígwè njem.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-movies-featuring-trains%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#HarryPotter trainmovies ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ